Madaxweynaha FX Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Madaxweynaha FX Forex Tusiyaha
Madaxweynaha FX Forex Tusiyaha
Madaxweynaha FX Forex Tusiyaha wuxuu ku salaysan yahay pivot, taageero / iska caabin ah oo ganacsi arrimuhu. Iyada oo tilmaame this, ganacsade ah ma laha in la falanqaynta suuqa ka qaban. All in loo baahan yahay in la raaco iibsan fudud ama iibiso calaamadaha ee ay tilmaanta.
Madaxweynaha FX waxaa inta badan loogu talagalay nidaamka ganacsi oo taageero iyo iska caabin. Taas macnaheedu waa in tilmaame uu ka faa'idaysanayo bed qiimaha u dhexeeya heerarka iska caabin ah oo taageero.
goobaha tilmaanta ayaa dhammaan heerarka taageero iyo iska caabin ku qoran; ka R1 in L4. Taageerada iyo iska caabin ah ayaa lagu wadaa in uu noqdo mid run ah, halka Ls ah ayaa lagu wadaa in ay note macnaha been ah si ay u isticmaalaan. The taageero iyo iska caabin ah heerarka ugu horreeyey waa: S1-2-3 iyo R1-2-3 siday u kala horreeyaan.
tilmaame ayaa sidoo kale wuxuu khiyaar ah ee soo socda isbeddellada waaweyn iyadoo la isticmaalayo laba filtarrada arrimuhu. ganacsade waxaa tegey mid fursad u ah iyadoo la isticmaalayo mid ama labada filtarka si aad u hesho calaamadaha sida arrimuhu ugu weyn ee hadda.
Marka la isticmaalayo Tilmaame this markii ugu horeysay on shaxda kasta, laga yaabaa in aad ma arkaan signal kasta muuqashada. Sida kale oo ay ku sugayaan calaamadaha ah in la ahbaa on jir waqtiga hadda, aad si fudud u toggle karaa inta u dhaxaysa Click here to wakhtiga ilaa aad ka hesho signal a on mid ka mid ah.
lagugu tuday sawirka.1. The tilmaame FX Madaxweynaha muujinaya ma waqti ay ku ganacsan.
Tusaale ahaan, haddii aad bilaabay isticmaalaya nidaamka on waqti H1 mana jiraan calaamadaha lagu muujiyey shaxda, beddelato jir mar kale laga bilaabo 5 xiliga cayiman ugu sareeya ee la ogol yahay ee aad madal ilaa aad ka hesho signal a. Haddii weli waxaa jira signal lahayn ahbaa kaliya isticmaali tilmaanta on labada nin kale ee lacagta.
Madaxweynaha amarada gelinayn FX.
Waxaa jira laba nooc oo ah tilmaame oo waa nooca aasaasiga ah iyo version pro. version The pro waa casriyayn ah version aasaasiga ah oo ay tahay ugu fiican oo ugu talinayaa in ay isticmaalaan. Labada bixiyaan calaamadaha ay ku geeska bidix ee kore ee shaxda.
Marka la isticmaalayo Tilmaame aasaasiga ah, aad arki doonaa calaamadaha ee foomkan:
Fig.2. Form of signal la siin marka la isticmaalayo nooca aasaasiga ah ee FX madaxa.
Sida cad ka dhekhso kor ku tilmaame keliya ku siiya qof line of signal in uu kuu sheegayaa in la gato ama la iibsado iyadoo qodobada stop khasaaraha iyo bartilmaameedka. Tani waa mid ka mid ah in uu la isbeddel weyn ee suuqa.
Si kastaba ha ahaatee, marka la isticmaalayo version Turbo ee tilmaanta, waxaad yeelan doontaa doorasho si aad u aragto calaamadaha double in u ekaan kartaa sidan:
Fig.3. Form of signal la siiyay marka la isticmaalayo version trbo ee tilmaanta FX madaxa.
Farqiga u dhexeeya labada nooc ee tilmaanta waa in la version turbo aad ku ganacsan kartaa labada dhinac ee arrimuhu waqti isku mid ah halka la version aasaasiga ah ee aad ku ganacsan kartaa hal dhinac oo dhaqaaqo kaliya.
Mararka qaar, sida ganacsade karaan is calaamadaha ku salaysan taageerada iyo iska caabin dhibcood inkastoo tani ma dhici aadan sidoo kale marar badan.
Iyadoo version Turbo ah, waxaad fursad u haysataa in ay ku ganacsan cayn kasta oo dhaqdhaqaaqa qiimaha. Taasi dabcan ka dhigan tahay fursad faa'iido dheeraad ah.
Madaxweynaha FX Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Madaxweynaha FX Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo madaxa FX Forex Indicator.mq4?
Download Madaxweynaha FX Forex Indicator.mq4
Copy Madaxweynaha FX Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on madaxa FX Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Madaxweynaha FX Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader ka saar madaxa FX Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousSearch Qaababka v6 Forex Tusiyaha
Next articleElliot oscillator Wave Forex Tusiyaha